Mwikibaki oo ku guulaystay Madaxtinimada Dalka Kenya | maakhir.com
Mwikibaki oo ku guulaystay Madaxtinimada Dalka Kenya
Nairobi:- Wararka naga soo gaadhaya Nairobi ayaa waxay sheegeen inuu ku guulaystay Doorashadii Dalkaasi Mwikibaki, sida ay xaqiijiyeen Gudiga guud ee doorashada Dalkaasi gacanta ku haya, waxay sheegeen inuu si rasmi ah ugu guulaystay Madaxtinimada Dalkaasi, ninka lagu magcaabo Mwikibaki, iyada oo ay soo baxayaan rabshado dheeraad ah oo Dalkaasi gabi ahaanba hadheeyay.
Sida ay sheegeen kooxaha Commission in uu ku guleystay doorashadii muranka weyn ka tagnaa ee dalka kenya madaxweynahii hore talada u hayey Mwai Kibaki isagoona helay 4,584,721, halkaasna uu ku ha dhay ninkii sida wayn ula tar tamayay Mwikibaki ee Raila Odinga.
Dibad bayxo rabshada wata yaa Dalkaasi duraba ha dheeyay goortii ay soo baxday inuu Mr Kibaki helay madaxtinimada Dalkaasi,Kumanaan taageersan Xisbiga Raila Odinga, ayaa isa soo tumay wadooyinka Magaalada Caasimada ah ee Nairobi kuwaasi oo dhagaxaan dhigay jidadka.
Ciidanka Booliska ayaa waxa la qubay wadooyinka iyo goobaha muhiimka ah ee Dawlada kuwaasi oo dhamaanba goobahaasi ku gadaaman waxyna sugayaan Amaanka guud, halka Elcotaro ay iyana hee haabayaan hawada sare kuwaasi oo iyaan Amaanka suga.
Samuel Kivuito oo gudoomiyaha Doorashada Dalka kenya ayaa warbaahinta ka sheegay inuu si xaq ah ugu guulaystay Mwikibaki Doorashadii Dalkaasi ee mudada laga dhur sugayay, waxa uu sheegay inaanay waxba ka jirin hadal ah inay jiraan wax is daba marin iyo Musuq maasuq e ay Doorashadaasi cadaalad ah u dhacay.
Samuel waxa uu ugu baaqay Xisbiga uu hogaamiyo Raila Odinga inay qancaan oo ay joojiyaan Rabshada ah iyaga oo eegaya hormarka Dalka.
« Xiisad colaadeed ayaa laga soo sheegayaa Xuduuda u dhexaysa labada Dal ee Eritrea iyo Itoobiya
Dagaal xalay ka dhacay Caasimada Somaliya ee Muqdisho »